कोशीमा रगत बग्नेछ, तर बाँध बनाउन दिने छैनौ
2017-09-11 प्रवोध साप्ताहिक
Q.तपाईहरु अहिले सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउने सहमतिको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिनु भएको छ किन ?
-सप्तकोशी नेपालका सात महत्वपूर्ण नदीहरु मिलेर बनेको छ । यो अन्तिम नदीको मिश्रण तमोर त्रिवेणीसम्म आउँदा सप्तकोशीको आकार ग्रहण गर्दछ । सातवटा महत्वपूर्ण नदीको मिश्रण भएका कारण पनि यो नदीसँग जोडिएको सभ्यता, वासस्थान, जलचर, पुरातात्विक वस्तुहरुको सुरक्षा जस्ता कुरा मात्र नभई नदी किनारमा आधारित सम्पूर्ण खेती प्रणाली र बसोबाकोसप्तकोशी उच्च बाँधका कारण विनाश हुँदैछ । यसका विरुद्ध प्रत्येक पटक नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुको भारत भ्रमणको क्रममा उच्च बाँधको एजेण्डा बन्नु , सहमति हुनु दुःखद कुरा हो ।
२०५४ सालमा पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला सप्तकोशी उच्च बाँधको डिपिआर बनाउने सहमति भएको थियो । २० वर्ष पछि तीनै देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतत भ्रमाणका बेला भएको ४६ बुदे सहमतिको २८ नं बुदामा सप्तकोशी उच्च ड्याम बनाउने भन्ने जुन सहमति भएको छ यो नेपाल र नेपाली जनताको हित विपरीतको राष्ट्र्रघाती र जनघाती सम्झौता हो । हामीले सक्रमणकालमै भएको कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौताको पीडा अहिलेसम्म भोग्नु परेको छ । तपाईले हेर्नु भयो कोशी व्यारेजका कारण ६५ साल भदौ २ गते कोशी फुट्दा सुनसरीका जनताको हालत के भयो ? त्यसैले भारतले मात्र हैन कि यो बाँध नेपाल आफैले पनि बनाउनु हुन्न भन्ने हो । यसको सट्टा नेपालका १४ हजार नदीनाला छन् माथिल्लो कर्णाली विश्वकै सस्तो आयोजना छ । यसमा सरकार आफू केन्द्रीत हुनु पर्यो , माथिल्लो कर्णाली पनि भारतकै जिएमआरलाई दिईएको छ । तसर्थः यो आयोजना नेपालको लागि नभई भारतको लागि हो ।
नेपाली जनतालाई डुबाएर भारतको बिहार जोगाउने षड्यन्त्र अनुरुप यो सम्झौता हो । मधेश आन्दोलनका बेला पनि मोदी सरकारले ओली सरकारलाई यस विषयमा भित्री रुपमा दवाव दिएको थियो । अहिले जुन सम्झौता भएको छ त्यसको विरुद्ध हाम्रो पार्टी पूर्ण रुपले आन्दोलनमा उत्रिएको छ । हामी २२ गते धरानमा विरोध प्रदर्शन गर्दैछौं र एवं रुपले आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं ।
Q.ठूल ठूला विकास आयोजना बन्न खोज्दा तपाईहरु त्यसको विरोध गर्नु हुन्छ भन्छन् नि अरु दलले ?
-हामीले के कुरा बुझ्नु पर्दछ भने नेपाल हिमालयको काँखमा अनेकौं प्राकृतिक स्रोत साधनहरुले सम्पन्न मुलुक हो । तर पनि विश्व गरीबीको सूचीमा हामी किन परिरहहेका छौ ? आज पनि नेपाली जनताहरुमा गाँस, बास, कपास, श्वास् श्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको कति समस्या छ हेर्नु भएको छ नि ? कि लाखौं नेपाली युवाहरु आज खाडीको तातो घाममा रगत पशिना बगाईरहेका छन् । त्यसले गर्दा समाजमा विभिन्न समस्या समेत देखा परीरहेको छ । तीनै खाडीमा युवाहरुको पसिनाको मुल्यमा नेपालका भ्रष्ट र दलाल सरकार रमाईराखेको छ । यसको आशय के हो भने हामी अनेकौ नदीनाला, बनजंगल, र स्रोत हुँदाहुदै पनि गरीबीको रेखामुनि पर्नुको कारण भनेको आर्थिक सामाजिक विकास नहुनु हो । यसको कारण भनेको नेपालको प्राकृतिक स्रोत विदेशीको हातमा सित्तैमा जानु , राज्य निरीह बन्नु र युवाहरु विदेशीको दास जस्तो श्रमिक बन्नु हो । यसैले हामीले अनेकौ प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गरेर उद्योगधन्दा , कलकारखाना, उत्पादनद्धारा मात्रै हामी धनी बन्ने हो । मानिलिऔं सप्तकोशी उच्च बाँध । यो बाँध विश्वकै ठूलो बाँध मध्ये एक हुँदैछ । यसले ठूलो मात्रामा प्राकृतिक सभ्यता खास गरी किरातीहरुको सभ्यताको विकाससगँ जोडिएको सम्पदा र पुरातात्विक महत्वको वस्तुको विनास गर्दैछ । यसपछि यो पानी थुनेर नेपालले पाउने के हो ? नेपालको विकास यसबाट कसरी हुन्छ ? जस्तो कोशी व्यारेज बन्दा नेपालले के पायो ? त्यही बाढीको पीडा हैन ? श्रीपुर, प्रकाशपुर, महेन्द्रनगर लगायतको क्षेत्रमा बर्षातको समयमा अझै पनि मानिस आनन्दले निदाउन सक्दैनन् यसको कारण कोशी व्यारेज हैन ? गण्डकको कुरा गर्नुस् महाकालीको कुरा गर्नुस् जुनसुकै बाँधबाट पनि भारतलाई फाइदा हुने र नेपाल डुब्ने , सिमा मिचिने बाहेक अरु के भएको छ ? त्यसैले भारतको बाढी नियन्त्रण, सिचाई पुरा गर्ने योजनाको रुपमा उसले नेपालको हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरुमाथि पूर्ण नियन्त्रण चाहेको छ भारतले यसबाट । पिउने पानीदेखि सिचाईसम्म र बिजुली निकालेर आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्ने लक्ष्यमा छ । हाम्रो सरकार दलका नेताहरु त्यसैको मतियार भएका छन् र नै हामीले जनघाती राष्ट्रघाती भनेका छौं । जहाँसम्म अरु दलको कुरा गर्नु भयो कोशी गण्डकी बेच्ने काँग्रेसहरु नै हुन् । महाकाली बेच्दा एमालेका अहिलेका अध्यक्षले नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भन्थे । अहिले कहाँबाट उदाएको छ ? ओलीलाई सोध्नुस् । त्यसैले भारतको आशिर्वादमा प्रधानमन्त्री हुने र उनीहरुको ईशारामा जे जे मन लाग्छन् त्यो दिदै सत्ता टिकाउने खेलमा लागेका संसदवादी दलहरुसँग हामीलाई केही भन्नु छैन । अर्को तपाईले के बुझ्नुस भने विकास आयोजनाको विरोधी हामी होईनौं । त्यो विकास हाम्रो मुलुकको हितमा हुनु पर्यो जनताको हितमा हुनु पर्यो भन्ने हो ।
Q.तपाईहरुको विरोधले मात्रै सप्तकोशी उच्च बाँध रोकिन्छ त ?
-हाम्रो पार्टी मात्रै त्यस्तो पार्टी हो जसले निरन्तर राष्ट्रियता र स्वाभिमानको पक्षमा , समृद्धिको पक्षमा निरन्तर दवाव सिर्जना गर्दै आएको छ । अहिले चुनावका नाममा जितको लागि भनेर करोडौं रकम खर्च गरेर चुनाव जित्न खोज्ने काग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य दलको हविगत के देखिरहनु भएको छ ? उनीहरु सत्ता स्वार्थ बाहेक अरु देशको दीर्घकालीन हित सोचेर जनताको पिरमर्का बुझेर हिडेका छन् त ? कुर्सी, पैसा र आफ्नो स्वार्थ भन्दा बाहेक उनीहरुले अरु देखेका छैनन् । अब जहाँसम्म प्रश्न छ हाम्रै कारण मात्रै यो बाँध रोकिन्छ त भन्ने , यसमा हाम्रो क्ु्रा के हो भने हाम्रो पार्टीको मुख्य लक्ष्य भनेको देश र जनताको मुक्ति हो । जनता समस्यामा परेकाबेला , देश संकटमा परेकाबेला जस्तो सुकै संघर्ष गर्न सक्ने पार्टी भनेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मात्र हो भन्ने कुरा जनतामा बिस्तारै स्थापित हुदैं गएको छ । पूर्वी नेपालमा यो उच्च बाँधको सम्झौता पछि जनतामा ठूलो निराशा पैदा भएको छ । कतिपय जनताले त यी नेताहरु सबैलाई आत्मघाती बम हानेर मारिदिए हुन्थ्यो भन्न थालेको पनि मैले सुनेकोछु ।
Q.सप्तकोशी बाँध के कारणले बन्नु हुदैन त ?
-हामी पहिलो कुरा विकास विरोधी होईनौ । तर विकासले प्राकृतिक विनाश र एउटा पक्षलाई ओझेलमा पार्ने कुरा खतरनाक छ । यहाँ विकासको नाममा भारतीय स्वार्थ अनुसार देशभर बाधिएका बाँधहरुले के भएको छ ? कोशी, गण्डकी , महाकाली सधै बाँधहरुले आज नेपाली जनताको हालत के भएको छ ? यही सप्तकोशीको कुरा गर्दा अब अझ जटिलता उत्पन्न हुने खतरा छ । सुनसरी जिल्ला अन्तर्गत बराह क्षेत्रदेखि १.६ किलो मिटरमाथि सुनखम्बी भन्ने स्थानमा धनकुटा जिल्लाको आहाले र उदयपुर जिल्लाको मैनामैनी सम्म करीब एक किलो मिटर लामो , २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँधमा १३ अर्ब ४५ करोड घन मिटरको बिशाल ताल बनाउँदा धनकुटा, उदयपुर, भोजपुर, सिन्धुली, ओखलढुंगा, रामेछाप, खोटांङ, तेह्रथु्म, पाचथर, संखुवासभा लगायतका जिल्लामा अरुण तमोर सुनकोशी नदीको जलाधार क्षेत्र आसपासका भुभागहरु डुब्ने र लाखौं नागरिक विस्थापित हुने साथै बाँधको तल्लो क्षेत्रमा रहेको पूर्वी मधेशको सम्पूर्ण भु–भाग उच्च जोखिम र क्षति हुने संभावना रहन्छ । साथै पूर्व क्षेत्रको चुरे पहाडको भुवनौट कमजोर भएको हुदाँ भौगर्भिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिले समेत उपयुक्त छैन ।
Q.विकास सम्बन्धि तपाईहरुको धारणा के हो त भोली कसरी देश विकसित हुन्छ त के छ आधार ?
-हामीसँग पहिलो कुरा देशमा भिजन भएको नेतृत्व भएन । अर्को जनता आधारित व्यवस्था लागु हुन सकेन । जस्तो नेपाल सन् १७६८ मा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको ८ वर्ष पछि मात्रै आजको अमेिरकाको जन्म भएको थियो । त्यसै गरी आजको जर्मन नेपाल भन्दा १ सय २ वर्ष पछि बनेको राष्ट्र हो । आज अमेिरका र जर्मनको अवस्था कहाँ पुग्यो ? कुनै दिन कोरियाली प्रायद्धिपको युद्धका कारण तहस नहस भएको दक्षिण काेिरया आशा हराएको देश भनिन्थ्यो । तर आज दक्षिण कोरिया कहाँ पुग्यो ? हाम्रा लाखौ युवाहरु रोजगारीका लागि कोरिया जान मरिहत्ते गरिरहेका छन् । देश विश्व बैंक र आईएमएफ तथा धनी मुलुकहरुको ऋणमा चलिरहेको छ । नेताहरुको जीवन शैली कुनै गरीब मुलुकको जस्तो लाग्दैन । आज देश कंगाल हुने तर नेताहरु धनी र चिल्ला हुने समस्या कहाँबाट आयो ? यसले कस्तो अवस्था पैदा गरेको छ । देशको प्रत्येक क्षेत्रमा दलालीकरण भएको छ । भ्रष्टाचारको कुनै सिमा छैन । अब भन्नुस् तपाई विकास कसरी हुन्छ ? चाहे शाहहरुले होस् चाहे राणाहरुले चाहे अहिलेका शासक दलहरुले उनीहरुले जहिले पनि आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथिबाट देशको समृद्धि सोचेको जस्तो लाग्दैन । जति विकासहरु भएका छन् यो जनताको दवावमा आंशिक मात्रामा भएका छन् । अब बिकास , समृद्धि र समानता बैज्ञानिक समाजवादमा मात्र संभव छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग र जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा हुने समानुपातिक विकास पद्धतिले मात्रै देशको परिवर्तन तीव्रतामा हुन्छ । अहिले जस्तो आयोजनाहरु विदेशीलाई दिने , पानी र कच्चा स्रोत बेचेर देश धनी बन्दैन । बिजुली बेचेर होईन बालेर देश धनी बन्छ भन्ने कुरा स्थापित हुन जरुरी छ ।
Q.यस्ता आयोजनाहरु भारतलाई दिनै नहुने चाहिँ किन ?
-तपाईलाई के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने अहिले भारतीय जनताको पनि ठूलो हिस्सा सप्तकोशी लगायतका बाँध बाध्न हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । एक जना भारतीय अभियान्ताले केही वर्ष अघि काठमाण्डौंमा भनेकी थिईन् “भारतको सरकार राक्षस हो , यसको दशथरी टाउकोले दश वटा कुरा गर्छ ” । यसै गरी विहारका विभिन्न अभियान्ताले उच्च बाँध बनाउन नहुने भनिरहेका छन् । तर भारतको शासक वर्गको कुरा जनताको हित भन्दा प्रतिकुल छ । भारतले ४५ सालमा चीनबाट हतियार ल्याएको भनेर नाकाबन्दी लगाए पछि शुरु भएको आन्दोलनमा पनि भारतीय विदेश सचिव एस के सिंह नेपाल आएर सबै नदीनाला भारतलाई दिए पञ्चायत जोगाईदिन्छौ भने पछि राजा विरेन्द्रले अस्वीकार गरेको बताइन्छ । भारत नेपाल भन्दा २२ गुणा ठुलो छ तर उसको स्वच्छ पानी नेपालको भन्दा ६ गुणा कम छ । उसलाई पिउने पानीको अभाव छ । गँंगा नदीको पानीको क्षेत्रमा ४७ देखि ७५ प्रतिशत हिस्सा नेपालको नदीनालाको छ । यसरी हेर्दा भारत नेपालको हिमाली जलाधारमा आधारित सबै नदीहरुमा आफ्नो सिँचाई, बाढी नियन्त्रण र पिउने पानीको व्यवस्थापनका लागि लैजान चाहन्छ । सप्तकोशीकै पानी पनि गण्डक र मेचीमा मिसाउने उसको मिसन छ । साथै उसले सप्तकोशीमा उच्च बाँध बनाउँदा विरोध हु्ने भएकाले नेपाली जनतालाई बाँध बाँधेपछि पानी जहाज चल्छ भन्दै दलका नेताहरु मार्फत राष्ट्रघाती सन्धिमा जनतालाई भ्रमित पार्ने कोशिस पनि गरिहेका छन् । सप्तकोशी उच्च बाँध भारतलाई मात्रै होईन स्वयं नेपाल र कुनै पनि मुलुकले यो बनाउनु जोखिमयुक्त छ ।